अनलाइन क्यासिनोहरू संसारभरि लोकप्रिय भएका छन्, फिलिपिन्सको बाहेक कतै छैन, जहाँ त्यहाँ देशभित्र धेरै शीर्ष अनलाईन क्यासिनोहरू अवस्थित छन्। फिलिपिन्सले क्यासिनो चलाउन राज्यको स्वामित्वको इजाजत पत्र एजेन्सी चलाउँछ। सबै नियन्त्रणहरू फिलिपिन्स मनोरन्जन र गेमि Corporation कर्पोरेशन वा PAGCOR को हातमा छन्। यो एसिया मा एक मात्र देश हो कि अनलाइन क्यासिनो लाईसेन्स।
फिलिपिन्स शीर्ष अनलाइन क्यासिनोहरू जुवा खेल्नको लागि सुरक्षित स्थान मानिन्छन्, अनलाइन प्लेयरलाई केही शान्तिको प्रस्ताव राख्छन्।
फिलिपिन्समा धेरै अनलाइन क्यासिनो साइटहरू उपलब्ध छन्। यहाँ केहि चाखलाग्दो साइटहरूको सूची छ जुन फिलिपिन्सका जुवाडेहरूले सपना देख्न सक्ने सबै कुरा प्रदान गर्दछ।
शीर्ष १० फिलीपीन अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
शीर्ष १० फिलिपिन्स अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
शताब्दीयौंदेखि, व्यक्तिहरूले विभिन्न अवसरका खेलहरू खेले। यो प्रवृत्ति निश्चित रूपले आजकल धेरै भू-आधारित, अनलाइन क्यासिनो स्थलहरू, पोकर कोठाहरू, र अन्य जुवा प्रतिष्ठानहरूको साथ जारी छ। प्राविधिक सुधारका लागि धन्यबाद, अनलाइन जुवा उद्योगले यसको वृद्धि र विकास देख्यो, विशेष गरी हालका बर्षहरूमा। अनलाइन क्यासिनोमा क्यासिनो खेलहरू खेल्नु भनेको खेलाडीहरूले आफ्नो घरको आराम नगरी नै जुवा खेल्ने आनन्द लिन्छन्।
यसका अतिरिक्त, तिनीहरू आफ्नो मनपर्ने खेलहरू कहिँँ पनि तिनीहरूको मोबाइल उपकरणहरू वा उनीहरूको डेस्कटप कम्प्युटरहरू प्रयोग गरेर पहुँच गर्न सक्दछन्। केही विरोधी नियमहरूको बावजुद, अनलाइन क्यासिनोको संसारले विगतका वर्षहरूमा उल्लेखनीय विस्तार देखाएको छ। विज्ञहरूले सुझाव गरेझैं यो प्रवृत्ति जारी नै रहेको मानिन्छ। वास्तवमा, अनलाइन क्यासिनोको विश्व बिभिन्न कारकका विभिन्न कारणहरू जस्तै नयाँ बजारहरू उभरिरहेको, इन्टरनेट विस्तार, र नयाँ खेलाडीहरू पंजीकरणको कारण विकसित भएको छ।
अनलाइन जुवा मार्केटको उदय
अनलाइन जुवा बजारको वृद्धिलाई धन्यवाद, फिलिपिन्सका खिलाडीहरूसँग बिभिन्न विकल्प हुन्छन् जब तिनीहरूको अनलाइन क्यासिनो विक्रेता छनौट गर्न आउँदछ। सन् २०१ 2005 मा अनलाइन जुवा बजार वास्तवमै दुई गुणा बढि बढेको छ, २०१ 40 मा विश्वव्यापी $० अर्ब डलर कमाइसकेको छ। यसको आश्चर्यजनक वृद्धि र विकासको क्रममा विभिन्न बजार खेलाडीहरू, सफ्टवेयर विक्रेताहरू, र अनलाइन क्यासिनोहरू दृश्यमा देखा परेका छन्।
यी प्रत्येक विक्रेता र उद्योग खेलाडीहरु प्रतियोगिता को अगाडि रहनको लागि केहि बढी र केहि राम्रो प्रदान गर्न कोसिस गर्छन्। यो वास्तवमै मुख्य फिलिपिनो अनलाइन क्यासिनोहरूले राम्रो बोनस, राम्रो खेल पुस्तकालयहरू, र केहि अद्वितीय सुविधाहरू प्रस्ताव गर्दछ। यी मुख्य साधनहरू हुन् अनलाइन क्यासिनोहरू अधिक खेलाडीहरू आकर्षित गर्न र उनीहरूको नियमित खेलाडीहरू अर्को अनलाइन क्यासिनोमा जानबाट रोक्नको लागि।
सत्य यो हो कि अनलाइन जुवा डेमोग्राफिक अधिक र अधिक विविध हुँदै गइरहेको छ। वास्तवमा अनलाइन जुवाको संसार सबैभन्दा लोकप्रिय मनोरन्जनको साधनहरू मध्ये एक भएको छ। जबकि अनलाइन क्यासिनो खेलाडीहरूको उमेर दायरा भर्खरको समयमा समाजमा बढ्दै गरेको इन्टरनेट प्रवेशको बृद्धि भएको छ, खेल प्राथमिकता अझै पनि खेलाडीको उमेरमा निर्भर गर्दछ।
यसबाहेक, अनलाइन क्यासिनो व्यवहार पनि पुरुष र महिलाबीच फरक हुन्छ किनकि सामान्यतया बोल्ने मानिस थ्रिलको लागि खेल्दछन् जबकि महिला आरामका लागि खेल्छन्। तसर्थ, पुरुषहरू उच्च दांवमा खेल्ने सम्भावना बढी हुन्छन् जबकि महिलाहरू कम दांव खेल्ने सम्भावना बढी हुन्छ। जे भए पनि, अनलाइन जुवा उद्योगको उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको लोकप्रियताका लागि धन्यवाद, अधिक र अधिक अनलाइन क्यासिनोहरूले जनताको लागि आफ्नो ढोका खोल्छन्।
अर्को शब्दमा, फिलीपीन्सका खेलाडीहरूसँग मनपर्दो विकल्प छन् जब यो तिनीहरूको शीर्ष अनलाइन क्यासिनो छनौट गर्न आउँदछ। विकल्पहरूको यस बढ्दो संख्याको साथ, सही क्यासिनो छनौट गर्न केही चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। यसैले हामीले खेलाडीहरूलाई गलत क्यासिनो छनौट गल्ती हुनबाट जोगाउन मद्दत गर्ने शीर्ष फिलिपिनो अनलाइन क्यासिनोहरूको सूची समावेश गरेका छौं।
मापदण्ड हाम्रो अनलाइन क्यासिनो रेटिंग्समा प्रयोग
त्यहाँ छनौट गर्न धेरै धेरै फिलिपिनो अनलाइन क्यासिनो विक्रेताहरू छन्। त्यसकारण, हामीले फिलिपिन्सका खेलाडीहरूलाई स्वागत गर्ने शीर्ष अनलाइन क्यासिनोहरूको विस्तृत सूची प्रदान गर्न दर्जनौं बिभिन्न अनलाइन क्यासिनो वेबसाइटहरूको जाँच गरेका छौं। खेलाडीहरू यो कुरा सुन्न निश्चित गर्न सक्दछन् कि हाम्रो सूचीले उद्योगमा केवल उत्तम स्थानहरू समावेश गर्दछ।
साइटहरू उनीहरूका खेल पुस्तकालयहरू, विश्वसनीयता, उनीहरूको ग्राहक समर्थन, बैंकि methods विधि, समयमै भुक्तान, सुरक्षा उपाय, र भाषाहरू सहित विभिन्न कारकहरू अनुसार क्रमबद्ध छन्। यहाँ सूचीबद्ध अनलाइन क्यासिनोहरू एक सय प्रतिशत सुरक्षित, पूर्ण नियमन, र इजाजतपत्र छन्, साथ साथै अन्य बहुमूल्य सुविधाहरूसहित प्याक गरिएका छन्, जसले शीर्ष अनलाइन क्यासिनो बनाउँछन्।
यसबाहेक, हाम्रो शीर्ष अनलाइन क्यासिनो रेटिंग्स पनि विभिन्न स्रोतहरूबाट भेला भएका खेलाडीको अनुभवमा आधारित छ। हामीले अन्य खेलाडीहरू, तिनीहरूका ग्राहक समर्थन विभागहरू, इजाजतपत्रहरू, बोनसहरू, र पदोन्नतीहरू, फिर्ताको सीमा, फिर्ता र जम्मा भुक्तानी विकल्पहरू, तिनीहरूका वेबसाइटहरू र तिनीहरूको मोबाइल अनुकूलता बीच क्यासिनो प्रतिष्ठा जाँच गरेका छौं।
फिलिपिन्समा मोबाइल क्यासिनो
फिलिपिन्समा मोबाइल गेमि big ठूलो व्यवसाय हो र त्यहाँ धेरै अनलाइन क्यासिनो छन् जुन अहिले मोबाइल गेम विकल्पहरू प्रस्तुत गर्दैछन्। मोबाईल उपकरणमा खेल्नाले ठूलो सुविधाहरू दिन्छ, शीर्ष शीर्षकहरू सबै अनुप्रयोगहरू र उद्देश्य-निर्मित मोबाइल क्यासिनो साइटहरू मार्फत उपलब्ध छन्।
जब तपाईं आफ्नो मोबाइलमा खेल्नुहुन्छ तपाईं समान उच्च-गुणवत्ताको खेलहरू र वास्तविक पैसा पुरस्कारहरूमा पहुँच प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन तपाईं डेस्कटप साइटबाट आशा गर्नुहुन्छ। तपाईं एक विशेष मोबाईल बोनस पनि पहुँच गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
हाम्रो शीर्ष रेटेड फिलिपिनो अनलाइन क्यासिनोहरूले सबै उत्कृष्ट मोबाइल गेमि options विकल्पहरू प्रदान गर्दछ, जुन विभिन्न उपकरणहरू र अपरेटि systems प्रणालीहरूको फराकिलोसँग उपयुक्त छ। तपाईंको आईफोन, आईप्याड वा एन्ड्रोइड उपकरणमा मोबाईल गेमि out प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् वा तपाईंको विन्डोज फोन मार्फत घुमाउरो दिनुहोस्।
फिलिपिन्समा जुवा कानून
फिलिपिन्समा जूवा कानून थोरै जटिल छ, तर यो दुई मुख्य नियामक निकायहरू- फिलिपिन्स मनोरन्जन र गेमि Corporation कर्पोरेशन (PAGCOR), र Cagayan आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (CEZA) द्वारा शासित छ।
भूमि आधारित जुवा स्थलहरू सहित बिंगो हलहरू, सट्टेबाजी पसलहरू, पोकर कोठाहरू, र ईंट र मोर्टार क्यासिनोहरू सबै PAGCOR द्वारा लाइसेन्स र नियमित छन्। यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ जबकि त्यहाँ ईगेम्स छन् जुन यस नियामक निकाय द्वारा इजाजतपत्र प्राप्त गरिएको छ, यी इलेक्ट्रोनिक गेमि machines मेशिनहरू हुन् अनलाइन जुवा साइटहरू होइनन् - यो केहि भ्रमपूर्ण हुन सक्छ।
फिलिपिन्समा CEZA लाई अनलाइन जुवा लाइसेन्स दिन्छ - तर CEZA लाइसेन्स प्राप्त जुवा साइटहरूले फिलिपिनोमा उनीहरूको सेवा प्रस्ताव गर्न सक्दैनन्। यो मूर्खतापूर्ण लाग्न सक्छ, तर तिनीहरूले फिलीपीन्स बाहिर विशाल एशियाई बजारमा आफ्नो सेवाहरू प्रदान गर्न सक्छ, CEZA एक लोकप्रिय इजाजतपत्र क्षेत्र बनाउने।
जब अफशोर अनलाईन क्यासिनोको कुरा आउँदछ, तिनीहरू फिलिपिन्समा आफ्नो सेवाहरू प्रस्ताव गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् किनकि २०१२ मा अदालतको अपीलको निर्णयले एउटा गतिविधि तोकेको थियो जुन स्पष्ट रूपमा अवैध छैन, सजाय दिन सकिदैन।
फिलिपिन्समा अनलाइन जुवालाई कानुनी ठानिन्छ - त्यहाँ कुनै कानून छैन जुन परदेशी अवस्थित अनलाइन क्यासिनोहरूमा पहुँच गर्न रोकिरहेको छ र फिलिपिनो कानूनी रूपमा यहाँ जुवा खेल्न सक्दछन्। तर राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्तेले २०१ 2017 मा देशका सबै अनलाइन जुवाहरू रोक्ने वाचा गरेका छन र यसले सबै अफसोर क्यासिनो फिलिपिन्सको बजारबाट फिर्ता लिने, वा अन्यथा रोकिएको देख्न सक्छ। उसले भनेका छन कि यदि उनीहरु कर विनियमन र स collect्कलन गर्न सक्छन् भने यसलाई पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ।
लेख्ने समयमा, केवल G'day क्यासिनोले फिलिपिन्सलाई उपलब्ध स्थानको रूपमा स्वीकार गर्दछ जब साइन अप गर्दा चयन गर्नका लागि - तर तपाईं अझै पनि खेल्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ, बस एक फरक स्थान र मुद्रा चयन गर्नुहोस्। यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि कानून परिवर्तन भएको अनुसार तपाईंले कुनै पनि ब्रेक नगर्न सुनिश्चित गर्नु पर्छ।
शीर्ष १० फिलीपीन अनलाइन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: 31 सक्छ, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० फिलीपीन अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० फिलिपिन्स अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
2 अनलाइन जुवा मार्केटको उदय
3 मापदण्ड हाम्रो अनलाइन क्यासिनो रेटिंग्समा प्रयोग
4 फिलिपिन्समा मोबाइल क्यासिनो
5 फिलिपिन्समा जुवा कानून
शीर्ष १० फिलिपिन्स अनलाइन ...